PEACEFUL PA: June 2010
Don't Overkill - Articles by Dr. Curtis Hutson ( 1 )
Articles By Dr. Curtis Hutson (1)
ကြွက်တကောင်ကို တံမြက်စည်းတချောင်း (သို့) စက္ကူမျဉ်းလုံးနဲ့ သတ်လို့ရပါတယ်။ ပြောင်းတိုသေနတ် (သို့) ၂၂ လက်မ ရိုင်ဖယ်နဲ့ သတ်လို့ရပါတယ်။ လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ဆိုလည်း ရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုလုပ်ရင်တော့ ကြွက်ပါမက၊ အိမ်ပါရသွားလိမ့်မယ်။
ဝက်တကောင်ကို ဘယ်လိုသတ်မလဲလို့ လူတချို့ ငြင်းနေကြသတဲ့။ တယောက်တပေါက် အကြံပေးကြတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဝက်ခေါင်းမှာ ဒိုင်းနမိုင်း ၂ လုံးတွဲချီပြီး၊ မီးရှို့ဖို့ အကြံပေးတယ်။ တခြားတယောက်ကတော့ ဒိုင်းနမိုင်း ပိုသုံးရင်ကောင်းမယ်လို့ ငြင်းပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ၂လုံးကိုပဲ အတည်ပြုလိုက်ကြတယ်။
ပေါက်ကွဲရင် မထိအောင်လို့ အဝေးကြီးမှာနေပြီး၊ စနစ်တံကြိုးရှည်ရှည်သုံးကြတယ်။ စနစ်တံကြိုးကိုမီးညှိပြီး၊ ခဏအကြာမှာ ဒိုင်းနမိုင်း ပေါက်ကွဲပါတယ်။ ဝက်လည်း အစပျောက်သွားတယ်။ ဝက်နားရွက်တဖက်တောင် ရှာမတွေ့ကြတော့ဘူး။
ဒိုင်းနမိုင်း ၂ လုံးအစား၊ ၄ လုံးသုံးဖို့ အကြံပြုခဲ့သူက "ဒိုင်းနမိုင်းပိုသုံးလို့ ငါ မပြောဘူးလား၊ အခု ကြည့်၊ ဝက် ထွက်ပြေးပြီ။ " တဲ့။
ကလေးကို စည်းကမ်းကိုင်တဲ့အခါ အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့။ အကျိုးရှိနိုင်တာထက် ပိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေ မထားပါနဲ့။
ပြီးတော့ ကိုယ်က ကောင်းစေချင်လို့ ရိုက်တာ။ လက်ဖဝါးကို တချက်ရိုက်တာက အလှပြင်ထားတဲ့ ပန်းတွေကို မကိုင်စေချင်ဘူးဆိုရင်၊ တချက်နဲ့ လုံလောက်ပြီ။ နှစ်ချက်ရိုက်မယ်ဆိုရင် - မရိုက်ခင်၊ အရင်တချက်ရိုက်တာကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲ ခဏစောင့်ကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာတခုကို ငြင်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ တဖက်လူကို နားလည်သဘောပေါက်ရုံပြောတာထက် မပိုပါစေနဲ့။ သူ့အမှား သူမြင်ရင် ထပ်ငြင်းဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ပြောနေရင် သူ့ကို နှိမ့်ချချိုးဖဲ့ရာရောက်ပြီး၊ ဘဝမှာ ရန်သူတယောက် ရလာတတ်ပါတယ်။
ဘတ်စကက်ဘောအသင်းတွေဟာ အမှတ်ခိုးတယ်လို့ အစွပ်စွဲ ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ တဖက်အသင်းကို နိုင်ပြီးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ ဆက်ကစားတယ်။ အပြတ်အသတ်နိုင်ဖို့ အမှတ်တွေ ဆက်ဆက်ယူတယ်။ ဒါမျိုးမှာ အမှတ်ခိုးခံရပြီလို့ တဖက်အသင်းက အမြဲခံစားကြရတယ်။ အခိုးခံရတာတွေလည်း ပြန်သတိရလာတယ်။ ရည်ရွယ်တာက အနိုင်ရဖို့ပါပဲ။ တဖက်အသင်းကို အရှက်ခွဲဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြဿနာကို ချေပဖို့ အကြောင်းအချက်ကောင်းတွေ အများကြီးရှိရင် အနိမ့်ဆုံးအချက်က စပြီးပြောပါ။ အကြောင်းမထူးရင်၊ သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ အချက်တခုကို သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး၊ ပညာပါပါ ပြောပါ။ မနိုင်သေးရင်၊ တတိယအချက်ကို ပြောင်းပါ။ အကောင်းဆုံးလက်နက်ကိုတော့ နောက်ဆုံးမှာထားပါ။ သုံးဖို့ မလိုလောက်ဘူးလို့လည်း မှတ်ယူထားပါ။
အကြောင်းပြချက်တွေကို စတာနဲ့ စက်သေနတ်ပစ်သလို အကုန်ချမပြပါနဲ့။ ဒုတိယအချက်ကို မပြောခင်မှာ တဖက်လူကို ပထမအချက်အတွက် ဆင်ခြင်ချိန်ပေးပါ။
ပရိတ်သတ်ကို သိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ တရားဟောဆရာဟာ အများကြီး သက်သေပြဖို့ မလိုဘူး။ တချက်တည်းကို ကျမ်းချက်တွေ အများကြီးပြနေတာနဲ့ သူ ဘာပြောချင်တာကို ပရိတ်သတ်က မေ့သွားတတ်တယ်။ " သစ်ပင်များလို့ တောအုပ်ကို မမြင်တော့ဘူး " ဆိုတဲ့ ရှေးစကားလိုပါပဲ။
အကြောင်းအချက်တွေကို သက်သေပြပါ။ ကျမ်းချက်လည်းထောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့။
တရားဟောဆရာတယောက်ကို တောရွာ အသင်းတော်တပါးမှာ တရားဟောဖို့ ဖိတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပရိတ်သတ် နားလည်ဖို့ တအားပြင်ထားတယ်။ တကယ်တော့ သူ့ဟာက အပြင်လွန်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ရာသီဥတု အခြေအနေ မကောင်းတော့ ဘုရားကျောင်းကို လူတယောက်ပဲ လာတက်ရှာတယ်။ တခြားလူလည်း မရှိတော့ စည်းဝေး မလုပ်ဖို့ အကြံပေးတယ်။ ဒါကို တရားဟောဆရာက " မဟုတ်ဖူး၊ ကျွန်တော်က တရားဟောဖို့ လာတာ။ တရားဟောရမယ် " လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဖွင့်၊ ကျမ်းချက်တွေ ထောက်ပြ၊ ဥပမာတွေ ပေးနဲ့ တနာရီခွဲလောက် ကြာအောင် တရားဟောပါတယ်။
နောက်ဆုံး သူတရားဟောပြီးတဲ့အခါ ဘုရားကျောင်းလာတက်တဲ့ လယ်သမား အဘိုးကြီးက "ဆရာ၊ နွားတွေ ကျွေးဖို့ဆိုပြီး၊ ကောက်ရိုး မြက်ခြောက်တွေ လှည်းတစီး အပြည့်တင်လာပေမယ့်၊ နွားကတကောင်ပဲ လာတဲ့အခါ၊ အဲဒီနွားကို ကျွန်တော်တော့ တလှည်းလုံး အကုန် မကျွေးဘူး " လို့ ပြောပါတော့တယ်။
သတိရပါ။ အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့။ ။
( June 22, 2001 နေ့ ထုတ် SWORD OF THE LORD စာစောင်မှ ပြန်ဆိုပါတယ်။ )
Posted by Papa at 10:25 PM
Labels: Dr. Curtis Hutson
သေးငယ်တဲ့ အရာတွေရဲ့ အရေးပါပုံ The importance of little things by Dr. Jack Hyles
သေးငယ်တဲ့အရာတွေဟာ အရေးပါနေတာကို ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ မုဆိုးမရဲ့ နဲပါးတဲ့အလှူငွေ၊ သခင်ယေရှုရဲ့ ပထမဦးဆုံးပြတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာထဲက ရေထည့်တဲ့ အိုးတွေ၊ ရှန်ဂါရဲ့ နွားမောင်းတဲ့ ဒုတ်၊ မောရှေရဲ့ တောင်ဝှေး - - - - စသည်ဖြင့် - - - -
အောင်မြင်မှုနဲ့ အရှုံးတုိ့ရဲ့ကြားက အဓိက ကွာခြားချက်ကြီးတခုကတော့ သေးငယ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ အလေးထားမှုပါပဲ။ အရည်အချင်းတူပါလျက်နဲ့ အောင်မြင်မှုမတူတတ်ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတချက်ရှိပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိသူထက် မရှိသူက ပိုအောင်မြင်တတ်တာလည်း ခဏခဏပါပဲ။
အောင်မြင်သူတယောက်ကို ဘက်စုံတော်တဲ့သူလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ သူလည်း အသေးအမွှားတွေမှာ အလေးထားလွန်းလို့ ဝေဖန်ခံရဦးမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်သေးရင်၊ အောင်မြင်တဲ့သူရဲ့ နည်းကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့မတူလို့ ဝေဖန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ နည်းစနစ်ကို ဆန်းစစ်တာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် မတူတာက အစကတည်းက မတူကြလို့ပါ။ မတူတာလေးတွေက လူကို ထူးခြားစေတာပါ။ ဝေဖန်မယ့်အစား အတုယူလိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
၁။ ထူးမြတ်ဖို့အတွက် အသေးအမွှားတွေလုပ်ရပါတယ်။ လူတွေက ကြီးမားတာပဲ လုပ်ချင်ကြတယ်။ စိန်ခေါ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့။ လူတွေ မတူရတာက အသေးအမွှားတွေကို ဂရုစိုက်ပုံ မတူလို့ပါ။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်တော့ အသေးအမွှားကို အလေးထားကြတယ်။ အရေးမကြီးတာတွေကို အလေးထားတယ်။ ဘာမဆို အရေးကြီးနေတယ်။ "ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာနဲ့ ကုန်းမြေတွေဆိုတာ မိုးရေစက်တွေ၊ သဲပွင့်တွေနဲ့ ဖြစ်တည်နေရတာကို " သိထားကြတယ်။
၂။ အသေးအမွှားကို အလေးမထားသူတွေက အလေးထားသူတွေကို နားလည်လွဲကြတယ်။ " ပိုလွန်းတယ်၊ ကြိုးစားလွန်းတယ် " ဆိုကြတယ်။ အချိန်တိကျတာ၊ သပ်ရပ်တာ၊ စေ့စပ်တာတွေအတွက်ပေါ့။ သူ့အတွက်က အသေးအမွှားရယ်လို့ မရှိတော့ လူတွေနားလည်လွဲတတ်ကြတာပေါ့။
၃။ ကြီးမားတာတွေဟာ သေးငယ်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ သိလာကြပြီ။ အားအပြင်းဆုံးအရာဟာ အသေးငယ်ဆုံးအရာတွေကို ခွဲစိတ်ထားတာပါ။ အက်တမ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ အားအပြင်းဆုံး ပေါက်ကွဲလာနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ အားဟာ ကြီးမားတဲ့အရာမှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အသေးအမွှားမှာ ရှိနေတယ်။ ပြင်းအားဟာ အသေးအမွှားကို ဂရုစိုက်သူမှာ ရှိနေတယ်။ လုပ်ထိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှကို အကောင်းဆုံး လုပ်သင့်ပါတယ်။
၄။ အသေးအမွှားကို ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်၊ ကြီးမားတာကိုလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်မှာပဲ။ တရားဟောရင် နောက်တန်းက ကြားရမှ၊ ရှေ့တန်းကလည်း ကြားရမယ်။
၅။ သေးငယ်တဲ့အရာတွေဟာ ကြီးမားတာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ လူတယောက်က ပြောဖူးတယ်။ " သတင်းစာပို့တဲ့ကလေးကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံနော်၊ တနေ့ သူဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံချေးဖို့ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားနေရဦးမယ်။ " တဲ့။ တခြားတယောက်ကလည်း ပြောတယ်။ " ခြံထဲမှာ ကစားနေတဲ့ ကလေးကိုလည်း ကြင်နာပါ၊ တနေ့ သူ့တရားရုံးမှာ အစစ်ခံချင် ခံနေရဦးမယ် " လို့ ဆိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ နိမ့်ကျသူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံ၊ အသေးအမွှားလည်း ကောင်းကောင်းလုပ်၊ လူနဲနဲကိုလည်း ကောင်းကောင်းဟော၊ အသေးအမွှားအလုပ်ကိုလည်း ကောင်းကောင်း ပြင်ဆင်ရင် ကြီးမြတ်သူတယောက် ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့အရာတွေဟာ ကြီးမားလာတတ်ပြီး၊ ကြီးမားတာတွေက သေးငယ်သွားတတ်တာကို မမေ့ပါနဲ့။ ဒါကို ခွဲခြားတတ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။
၆။ အလုပ်ကို အရွယ်အစားနဲ့ မတိုင်းရဘူး။ အမှန်အတိုင်းပဲတိုင်းရတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက် တံမြက်စည်းလှည်းနေတာ တွေ့ရဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကြီးမြတ်တာပဲ။ အသေးအမွှားမလုပ်ချင်ရင် ကြီးမားတာတွေ မတွေ့ရတတ်ဘူး။ မလုပ်တတ်ဘူး။ ပညာမရဘူး၊ ဇွဲမရှိဘူး။ ကိုယ်နဲ့ မတန်ဘူးထင်ရင်လည်း လုပ်ပါ။ အလုပ်က မကြီးမြတ်ပေမယ့် လုပ်နည်းက ကြီးမြတ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး၊ ဒီထက်ပိုကြီးမြတ်တာတွေနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ သူတပါးမြင်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်မယ့် နည်းစနစ်တွေလည်း သင်ယူပြီးသား ဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့။
၇။ အသေးအမွှားတွေကို အမြဲစစ်ဆေးတဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ။ ငွေကို အားမကိုးနဲ့။ ကြီးမားတာတွေကို အလိုလို အမှတ်ရနေမယ်။ အသေးအမွှားတွေကိုတော့ သတိထားတတ်မှ ရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ချက်ချင်း လုပ်ပါ။ အသေးအမွှားတွေကို သတိမထားတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်တွေကို ပျက်စမှာ မပြင်လို့ ဈေးကျရတယ်။ ကားတွေလည်း ပျက်စမှာ မပြင်တော့ ဈေးကျတတ်တယ်။
၈။ အသေးအမွှားတွေကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်နဲ့ တူစေပါတယ်။ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကြီးကို ဦးဆောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သမ္မတတို့၊ ဝန်ကြီးတို့၊ မြိုတော်ဝန်တို့လည်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကလေးငယ်တွေအတွက် အချိန်ပေးခဲ့တယ်။ ပုံဥပမာကလေးတွေ ပြောပြတယ်။ ပန်းပွင့်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ ဥယျာဉ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ ပျောက်တဲ့ ဒင်္ဂါးတပြား၊ အိမ်ပြေးကလေးတယောက်အကြောင်းတွေကို ပြောပြတယ်။ ဘုရားသခင်က ငှက်ကလေးတကောင်ကျသွားတာလည်း မှတ်ထားတယ်။ တောနှင်းပန်းကိုလည်း အလှဆင်ထားတယ်။ ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။
၉။ အသေးအမွှားတွေကို အလေးမထားရင် အတွေ့အကြုံမှာ စကားပြောလာမယ်။ တိုးတက်ချင်တဲ့လူဟာ ကိုယ်တော်တာ၊ ကိုယ်ညံ့တာတွေ သိရမယ်။ ကြီးမားတာတွေကို လုပ်ပြီးရင် ပြီးပြီလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုဆိုတာ အခု လက်ရှိဘဝကို စိတ်ကြေနပ်မှုအပေါ်မှာတည်တယ်။ အဲဒီတော့ အသေးအမွှားတွေကို မလုပ်မိရင် မပျော်တော့ဘူးပေါ့။ အလုပ်မှန်သမျှ အရေးကြီးတယ်၊ နေ့တိုင်းဟာ အရေးကြီးတယ်၊ တရားဒေသနာတိုင်းဟာလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ မှတ်ရပါမယ်။ Every job isabig job. Every day isabig day. Every sermon isabig sermon.
ကျွန်တော် ကျမ်းစာကျောင်းတက်တုန်းက တပတ်တာ အစီရင်ခံစာကို တနင်္လာနေ့တိုင်းတင်ရတယ်။ ကျွန်တော်က " Dr. Bruce , ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ အတော် အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ တောက အသင်းတော်သေးသေးလေးမှာ သင်းအုပ်လုပ်ရတယ်။ - - - - - "
Dr. Bruce က စကားဖြတ်ပြီး၊ " ထိုင်တော့ Mr. Hyles " လို့ ပြောပါတယ်။ အစမှာတော့ ဘာလို့ ထိုင်ခိုင်းသလဲဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ဘူး။ တခြားသူတွေ ပြောတော့ သူမကြိုက်တာမတွေ့ရဘူး။ Dr. Bruce ကို လက်မြှောက်ပြပြီး မေးမိတယ်။ " Dr. Bruce ကျွန်တော် ဘာအမှားပြောမိလို့လဲ " - - -
Dr. Bruce ရဲ့ အဖြေကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ "တောက အသင်းတော်သေးသေးလေးလို့ ပြောတယ် မဟုတ်လား။ အသင်းတော်သေးသေးလေးရယ်လို့ မရှိဘူး။" ဒါနဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး " အစီရင်ခံစာ ပြန်တင်ချင်ပါတယ်။ မနေ့က အသင်းသား ၁၉ ယောက်၊ တပတ်လစာ ခုနှစ်ဒေါ်လာခွဲနဲ့ အသင်းတော် အကြီးကြီးမှာ သင်းအုပ်လုပ်ရပါတယ်၊ "တတန်းလုံး ဝါးတနဲ ရီကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မမေ့နိုင်စရာ သင်ခန်းစာတခု ကျွန်တော်ရသွားပြီ။ အသင်းတော်သေးသေးလေးရယ်လို့ မရှိဘူး။တရားဟောဆရာ သေးသေးလေးရယ်လို့ မရှိဘူး။ လူ သေးသေးလေးရယ်လို့ မရှိဘူး။ အလုပ် သေးသေးလေးရယ်လို့ မရှိဘူး။ ။
Posted by Papa at 9:53 PM
JOKES - ဟာသ
ကလေးနှစ်ယောက် သူ့အဖေတော်တယ်၊ ငါ့အဖေတော်တယ်နဲ့ အပြိုင်ငြင်းနေကြတယ်။
Billy - ဘေးလီ ။ ။ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာကို သိတယ်နော် ? ။ အေး၊ အဲဒီ သမုဒ္ဒရာဖြစ်ဖို့ ငါ့အဖေက ဂွက်ကြီး တူးခဲ့တာကွ။
Gerry - ဂယ်ရီ ။ ။ ဒါ ဘာဟုတ်သေးလို့လဲ ? ။ ပင်လယ်သေဆိုတာ သိသလား?။ အေး၊ အဲဒီ ပင်လယ်ကို သေအောင် သတ်ခဲ့တာ ငါ့အဖေကွ။ ။ :)
" မင်းခွေးက ဘာအမျိုးလဲ " လို့ လမ်းဖြတ်သွားသူတယောက်က အမျိုးအမည်မတပ်ထားတဲ့ ခွေးကိုကြည့်ပြီး၊ ခွေးပိုင်ရှင် ကလေးငယ်ကို မေးပါတယ်။
" ဂျာမန် ရဲ ခွေးပါ " လို့ ခပ်ကြွားကြွားဖြေတယ်။
" သိပ်မတူဘူးကွ " လို့ မှတ်ချက်ချတဲ့အခါ - - -
" သူက စ ပိုင် ခွေးလေ " လို့ အတည်ပေါက် ပြန်ဖြေပါတယ်။ ။ :)
" ဘာဖြစ်သလဲ " လို့ ဆရာဝန်က မေးတယ်။
" အော်၊ ကျွန်တော်က မှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်နေတုန်း၊ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးက မီးပူတိုက်နေပါတယ်။ သူက မီးပူကို တယ်လီဖုန်းနားမှာ ချထားတယ်။ တယ်လီဖုန်းမြည်တော့ ကျွန်တော်က မီးပူကို ကောက်ကိုင်ပြီး ထူးမိတာပါပဲ။
ဆရာဝန်က ခေါင်းငြိမ့်ပါတယ်။ " ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ နားတဖက်က ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ? "
" ဖုန်းချလို့မှ ဘာမှမကြာသေးဘူး ဆရာရယ်၊ အဲဒီလူက ဖုန်းထပ်ခေါ်တယ်ဗျာ။ ။ :)
ဆရာဝန် ။ ။ ကျွန်တော် သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ ခင်ဗျား အနားယူဖို့ပဲ လိုတာပါ။
အမျိုးသမီး ။ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မမှာ ဆေးလိုပါတယ်။ ကျွန်မ လျှာကို ကြည့်ကြည့်ပါ ဆရာ။
ဆရာဝန် ။ ။ အင်း၊ အဲဒီလျှာလည်း နားဖို့ လိုပါတယ်။ ။ :)
ဖါရောဘုရင် စစ်မြင်းရထားစီးပြီး အပြန် -
Pharaoh Coming Home From A Chariot Ride
John Jasper ရဲ့ ဟောပြောပုံက အသက်ပါပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက သူရဲကောင်းတွေနဲ့ လူဆိုးတွေဟာ သူ့ဒေသနာကြောင့် စင်မြင့်တလျှောက် ဖြတ်လျှောက်လာကြသလို ထင်ရစေပါတယ်။ စစ်မြင်းရထားစီးပြီး ပြန်တဲ့ ဖါရောဘုရင်အကြောင်း ပြောပြပုံကလေးကတော့ - - - -
" နန်းတော်တခုလုံး ဖါးတွေနဲ့ပြည့်နေပြီ။ ဖါရောဘုရင်ရဲ့ စစ်ခြေထောက်သံဟာ ကျောက်သလင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ညံသွားတယ်။ ဖါးတွေကတော့ ပတ်ချာလည်မှာ အပြည့်ပဲ။ အကောင်းစားထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာ၊ တန်းလျားရှည်တွေပေါ်မှာ၊ စန္ဒယားကြီးပေါ်မှာ၊ ဟ - ဟ -ဟ ၊ ဖါးတွေက မုန့်တွေအပေါ်မှာ ကစားနေကြ၊ အသားတုံးတွေအပေါ်မှာ ဝပ်နေကြပြီ။ ဖါရောက ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတဲ့ အခြေအနေကို တုတ်တချောင်းနဲ့ ရှင်းဖို့ ကြိုစားတယ်။ ဖါးတကောင်ကို ရိုက်ပစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့မိဖုရားက အကြီးအကျယ် အော်ပြောလာတယ်။ " ဖါရော - - - ဒီဖါးကြီးတွေကို ရှင်ဘာမှ မလုပ်နိုင်ရင်၊ ကျွန်မ အမေ့အိမ်ပြန်တော့မယ်။ " ။ :)
လူတယောက်က တောထဲမှာ ဦးတည်ရာမဲ့ လျှောက်သွားနေသူတယောက်ကိုတွေ့တော့ " ခင်ဗျား၊ လမ်းပျောက်နေသလား " လို့မေးပါတယ်။ အဲဒီလူက " မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် လမ်းမပျောက်ဘူး။ အိမ်ပျောက်နေတာပါ။ " တဲ့။ အဖြစ်မှန်ကို ဝန်မခံချင်တဲ့ အပြစ်သားရဲ့သဘာဝတမျိုးပါပဲ။ ။ :)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ပြည်နယ်က စီးပွါးရေးသမားတယောက်က " ဆင်တကောင်ကို ဘယ်လိုစားရမလဲ" လို့ မေးပါတယ်။
" မသိဘူး " လို့ ဖြေတော့ -
" တခါစားရင်၊ တကိုက်ပဲ စား " လို့ ဖြေပါတယ်။ ။ :)
အိမ်နီးချင်း။ ။ မင်းရဲ့သားက ဖျော်ရည်ဆိုင် ဖွင့်လိုပါလား ?
ဖခင် ။ ။ အေး၊ အစိုးရ လိုပေါ့ကွာ။ သူ့အမေက သံပရာသီးနဲ့ သကြားစိုက်ရတယ်။ ငါကတော့ သူလိုတာ ပြေးဝယ်ပေးရတာပေါ့။ ။ :)
အလုပ်များနေသော အရာရှိ။ ။ ငါ့ခဲတံ ဘယ်မှာပါလိမ့် ?
အတွင်းရေးမှူး။ ။ ဆရာ့နားနောက်မှာပါ။
အရာရှိ။ ။ ကဲ - လာပါဦးကွယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါသိပ်အလုပ်ရှုပ်နေတာဆိုတော့။ ဘယ်ဖက်နားပါလိမ့်ကွာ။ ။ :)
သခင်ယေရှုကြွလာချိန်မှာ သင်ဘာလုပ်နေချင်သလဲ ?
What Would You Like to Be Doing When Jesus Come?
ခရစ်ယာန်ဖခင်တယောက်က သခင်ဘုရားဟာတနေ့မှာ သူချစ်တဲ့သူတွေကို ကောင်းကင်အရောက် ခေါ်ဆောင်ဖို့ ကြွလာလိမ့်မယ်လို့ သူ့သားသမီးတွေကို ပြောပြနေပါတယ်။ စောင့်မြော်နေရင်း သူတုိ့အသက်တာကလေးတွေမှာ အကျိုးရှိစေဖို့အတွက် သခင်ယေရှုကြွလာရင် ဘာလုပ်နေချင်သလဲလို့ တယောက်ချင်းကို မေးလိုက်ပါတယ်။
အကြီးဆုံးသားက ထင်းကောက်နေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သမီးအကြီးက ပန်းကန်တွေ ဆေးနေချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် သမီးငယ်ကလေးကတော့ ငိုနေချင်ပါသတဲ့။
"သခင်ယေရှုကြွလာတာဟာ ငိုစရာမဟုတ်ဘူး သမီးရဲ့ " လို့ အဖေကပြောပါတယ်။
" ဟုတ်တယ်လေ၊ ဖေဖေရဲ့။ ဒါမှ - သခင်ယေရှုက သမီးရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့။ " လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြေပါတယ်။ :)
-- From Listen, July 1981.
မိခင်က သူ့သမီးငယ်ကလေးကို Dr. H. A. Ironside အကြောင်း မကြာခဏ ပြောပြပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ တရားဟောဆရာကြီး A great preacher လို့ ပြောပြတတ်ပါတယ်။ တနေ့ သမီးငယ်ကလေးဟာ Dr. Ironside ရဲ့ တရားပွဲတခုကို သွားပါတယ်။ ဟောနေကြအတိုင်း ရိုးရိုးပဲဟောပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းကအပြန်မှာတော့ " မေမေ၊ မေမေပြောတော့ Dr. Ironside က အရမ်းထူးခြားတဲ့ တရားဟောဆရာကြီးတဲ့။ ဘာမှလည်း မထူးခြားပါလား မေမေရယ်။ သူပြောနေတာတွေ သမီးအားလုံးနားလည်လိုက်တာပဲ။ " လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဒီအကြောင်း ပြောမိကြတဲ့အခါ Dr. Ironside က " ကျွန်တော်ကို ချီးကျူးတဲ့စကားတွေထဲမှာ ဒီစကားက အကောင်းဆုံးပဲဗျာ " လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ။ :)
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ ဒေါက်တာ မေယို Actress versus Dr. Mayo
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဘေးလီ ဘတ်ခ်ဟာ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာခရီးစဉ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတုန်း နောက်က စားပွဲမှာ လေးစားဖွယ်လူတယောက် အအေးမိတဲ့ဝေဒနာကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရတာကို သတိပြုမိသွားပါတယ်။
" မသက်သာဘူးလား " လို့ မင်းသမီးက သနားကြင်နာစွာ မေးပါတယ်။
" လာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြမယ်။ ရှင့်အခန်းကို ပြန်။ လိမ်မော်ရည် များများသောက်။ အက်စပရင် ၅ ပြားသောက်။ ရှိသမျှစောင်တွေ ယူခြုံလိုက်။ ဒါဆို အချမ်းပျောက်ပြီး ချွေးထွက်လာမယ်။ ကျွန်မက နားလည်လို့ ပြောတာ။ ကျွန်မက ဟောလိဝုဒ်က ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဘေးလီ ဘတ်ခ်ပါ " လို့ ပြောပါတော့တယ်။
အဲဒီလူက ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြုံးပြပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ " ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် မေယို အထူးကုဆေးခန်းကြီးက ဒေါက်တာ မေယို ပါ။ " ။ ။ :)
Posted by Papa at 10:30 PM
Labels: Joke, ဟာသ
ဘဝဆိုတာ ပေါင်းဖေါ်ပတ်သက်ရတာတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ အဖက်ဖက်မှာ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီး ၊ လင်မယား ၊ မောင်နှမ ဆက်ဆံရေးတွေကတော့ ထူးပြီး ရှင်းပြနေစရာ မလိုပါဘူး။ မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အရေးကြီးပုံကတော့ ရှင်းပြဖို့လိုပါမယ်။ အတော် များများက ဒါကို အရေးကြီးတယ် လို့ သဘောမထားကြဘူး။ အလေးထားသင့်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းရဲ့ အကျိုးတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
၁။ ဒါက ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးအနဲငယ်ထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမေ၊ အဖေ၊ အကို၊ အမ၊ သား၊ သမီးတွေကို ရွေးယူလို့ မရဘူး။ ဘုရားက ရွေးပေးပါတယ်။ ဘုရားပေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမို့ သန့်ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီ ဆက်ဆံရေးတွေလို ရင်းနှီးအောင် လုပ်လို့ရတာတွေ နဲနဲရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်ရွေးတာမို့ သန့်ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိတ်ဆွေဆိုတာ ပါပါတယ်။ မိတ်ဆွေဆိုတာ ကိုယ်ကရွေးရတာပါ။ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ လောကကြီးမှာ လူတွေဟာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ နေကြရတာပဲ။ သန့်ရှင်းတဲ့အရာပါ။
၂။ လုံးဝ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်တဲ့ ဆက်ဆံရေးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမှာ မိဘလိုတယ်။ အများအားဖြင့်
ေ နာက်ပိုင်းမှာ မိဘက သားသမီးကို လိုအပ်လာတယ်။ ယောင်္ကျားမှာ မိန်းမလိုတယ်။ မိန်းမကလည်း ယောင်္ကျားလိုတယ်။ အဲဒီ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဖြူစင် သန့်ရှင်းစွာ ကိုယ့်အကျိုးကြည့်တာလေးတော့ ပါနေ တတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရွေးရာမှာတော့ ကိုယ်ကပဲပေးပြီးတော့ ပြန်မယူပဲနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကပဲ ကူညီပြီးတော့ အကူအညီ ပြန်မတောင်းပဲ နေနိုင်ပါတယ်။ ချစ်ရုံချစ်ပြီး၊ အချစ်ကို ပြန်မတောင်းဆိုပဲ
နေနိုင်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်ပေမယ့် ဂရုစိုက်ဖို့ ပြန်မတောင်းပဲ နေနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမတောင်းဆိုပဲ၊ ပေးပဲပေးနေရင် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်တဲ့ ဆက်ဆံရေးအဖြစ် စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
၃။ မိတ်ဆွေဆိုတာ မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးထဲမှာပါပါတယ်။ သားသမီးတွေ ကြီးလာတော့ အိမ်က ထွက်သွားကြတယ်။ မိဘတွေလည်း အသက်ကြီးပြီး ကွယ်လွန်ကြရတယ်။ အကို အမတွေလည်း အိမ်က ထွက်သွားကြတယ်။ အစမှာတော့ ကလေးက မိဘကိုလိုတယ်။ နောက်တော့ မိဘက သားသမီးကို လိုတယ်။ အိမ်ထောင်မှာတောင် နှစ်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှ လိုအပ်မှုတွေ ပြောင်းလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေမှာတော့ အဲဒီလို ပြောင်းဖို့ မလိုဘူး။ မိဘများလည်း သားသမီးတွေကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ပြန်ကြည့်ပေးဖို့ လိုလာတာ ဝန်ခံကြမှာပါ။ လူ့ဘဝမှာ ဆက်ဆံရေး အတော်များများက ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေကတော့ နှစ်ကာလတွေကြာလာပေမယ့် ပိုသိပိုတတ်လာပေမယ့် မိတ်ဆွေဖြစ်မှုကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ။
၄။ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တဖက်သားလက်ခံဖို့ မလိုပါဘူး။ လင်ယောင်္ကျားဖြစ်ဖို့ တဖက်သားလက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ ဇနီးသည်ဖြစ်ဖို့ တဖက်သားက ကမ်းလှမ်းဖို့ လိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ဒီလို မလိုဘူး။ တဖက်က မဖြစ်လည်း ကိုယ်ကဖြစ်နေလို့ ရတယ်။ တနည်းပြောရရင် တုန့်ပြန်ဖို့ မလိုဘူး။ တဖက်သား လက်ခံလို့ ရွေးချယ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူက လက်မခံလည်း ကိုယ်က မိတ်ဆွေ ဆက်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ မိတ်ဆွေရှိတာဟာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။
၅။ တခြားတယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ လက်ရှိမိတ်ဆွေကို စွန့်လွှတ်စရာ မလိုဘူး။ တချို့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာက တယောက်တည်းပဲဖြစ်နိုင်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ်မှုမှာတော့ အသစ်ရဖို့ အဟောင်းနဲ့ လဲစရာမလိုဘူး။ တယောက်မှ ဆုံးရှုံးသွားစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ သူ့မိတ်ဆွေလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဝိညာဉ်သဘော အပြည့်အဝရှိနိုင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများ ဆက်ဆံရေးတွေက ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပါတ်သက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေး လိုအပ်ချက်တွေလည်း ရှိတော့ရှိပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးဆိုတာကတော့ မြင့်တာပေါ့။ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့က ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ လိုအပ်ချက်မပါလည်းရတယ်။ စိတ်ဝိညာဉ်ချင်း ချည်နှောင်ထားနိုင်တယ်။ အသွေးအသား လိုအင်ပြည့်ဝမှုအပေါ်မှာ အခြေမခံဘူး။
၇။ မိတ်ဆွေကို ဘဝရဲ့ ဘယ်အချိန်မှာမဆို ရွေးလို့ရတယ်။ သားသမီးရမှ မိဘဖြစ်ရတယ်။ အရွယ်ရောက်မှလည်း သားသမီးရနိုင်တာ။ ညီအကို မောင်နှမကို ကလေးဘဝမှာရတယ်။ တချို့အသက်အရွယ်တွေဟာ ကလေး မရနိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှစ်နှစ်သားမှာ မိတ်ဆွေရနိုင်သလို၊ အသက်ရှစ်ဆယ်မှာလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။
မိတ်ဆွေဖြစ်မှုဆိုတာ မြင့်မြတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတမျိုးပါ။ သူ့ရဲ့နက်နဲမှုကို လူနဲနဲကပဲ သိပါတယ်။ အများစုက မိတ်ဆွေကို မသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း မိတ်ဆွေ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူ့ဘဝရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေထဲမှာ ဇနီးနဲ့ ခင်ပွန်း၊ အမေနဲ့ သမီး၊ အဖေနဲ့ သား၊ မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ မိတ်ဆွေလည်း ပါပါတယ်။ မိတ်ဆွေရှိတာဟာ မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေစိတ်ရှိ်တဲ့သူကတော့ ပို မင်္ဂလာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ မင်္ဂလာအရှိဆုံးကတော့ မိတ်ဆွေလည်းရှိ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မိတ်ဆွေစိတ် ရှိတဲ့သူပါပဲ။ ဒါဟာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ။
အချိန် Blue Denim and Lace - by Dr. Jack Hyles ( Burmese )
" နေ့ရက်ကာလ၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်မည်။ " (ဗျာဒိတ် ၁၀း၆ ) ( Sorry! ဒီကျမ်းချက်က အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာ မတူဘူး ဖြစ်နေတယ်။ )
အချိန်ဆိုတာ အနက်ဖွင့်ရှင်းပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ အချိန်ဆိုတာ ပြက်စီးယို့ယွင်းခြင်းကိုတိုင်းတဲ့ ပေတံတမျိုးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘုရားသခင်မှာ အချိန်မရှိဘူး။ ထာဝရကာလမှာ အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ စဉ်းစားဖူးပါသလား။ အဲဒီမှာတော့ ပြက်စီးယို့ယွင်းခြင်းမရှိတော့ဘူး။ တန်ဖိုးလျော့သွားတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ အချိန်ဆိုတဲ့ ပေတံလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။
အသက်ရလာလေလေ၊ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ဟာ အချိန်ပဲဆိုတာ နားလည်လာရတယ်။ တကယ်လည်း ပေးနိုင်တာက အချိန်ပါပဲ။ ပိုက်ဆံပေးရင်၊ အဲဒီပိုက်ဆံရဖို့ သုံးစွဲခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကိုပေးရတာပါပဲ။ လက်ဆောင်ပေးရင်လည်း အဲဒီလက်ဆောင်ရဖို့ သုံးစွဲခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကိုပေးရတာပါပဲ။ ဆိုတော့ ပေးနိုင်တာက အချိန်ပါပဲ။ အချိန်ဟာ အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကတော့ - - -
၁။ အချိန်ဆိုတာ လူ့ဘဝမို့ အချိန်ပေးတာဟာ အသက်ကိုပေးနေရတာပါ။ သူတပါးအသက်ကို
နှုတ်ယူတာဟာ သူ့အချိန်တွေကို ယူပစ်လိုက်တာပါ။ လူသတ်တာဟာ သူ့ရဲ့အချိန်တွေကို ယူပစ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ အသက်ပေးနေတာပါ။ အချိန်ဆိုတာ လူ့ဘဝပါ။
အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာထက် ပိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရာ ရှိပါဦးမလား။ သူတပါးကို အချိန်ပေးတာဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတပါးရဲ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစို့။
၂။ လူတယောက်ကို အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ အပေးခံရသူတယောက်တည်းကိုသာ ပေးနိုင်တာပါ။ ပေးတဲ့အချိန်ဟာလည်း ပြန်မရနိုင်တော့ဘူး။ ပေးပြီးသားအချိန်ကို တခြားတယောက်ကို ပြောင်းပေးချင်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါကိုသိထားရင် မိတ်ဆွေတွေကို အချိန်ပေးရတာကို ကြည်နူးလာမှာပါ။ မိတ်ဆွေက ကိုယ့်ကို အချိန်ပေးတာဟာ သူ့အသက်ကို ပေးနေရုံမျှမက တခြားတယောက်ကို ပြောင်းပေးချင်လို့ မရနိုင်တာကို ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တယောက်နဲ့တယောက် အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ တကယ်ပိုင်တယ်လို့ သိတဲ့အချိန်ကလေးကို လဲလှယ်ကြတာပါ။ လက်ရှိအချိန်ကလေးကိုပဲ ပိုင်ကြတာပါ။ တကယ်ပိုင်တဲ့ အခုအချိန်ကလေးကိုပဲ ဝေမျှ၊ ဖလှယ်နေကြရတာပါ။ နောက်ထပ် အချိန်ရ၊ မရလည်း မသေချာပါဘူး။
၄။ မိတ်ဆွေတယောက်ကို အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ကောင်းကင်ကပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေထက်တောင် ကြီးမြတ်ပါသေးတယ်။ ကောင်းကင်မှာ အချိန်မရှိတဲ့အတွက် အတူနေပေမယ့် အချိန်မျှကြရတယ်လို့ မရှိဘူး။ ကောင်းကင်မှာ ထာဝရအသက်ရှင်ရတာမို့ ကောင်းကင်ကျရင်အသက်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ကောင်းကင်မှာ မပေးနိုင်မယ့် လက်ဆောင်ကို အခု မြေကြီးပေါ်မှာပေးရတာပါ။ ကောင်းကင်မှာတော့ အချိန်ပေးဖို့အတွက် ဘာမှပေးဆပ်စရာမလိုဘူး။ ဒါကြောင့် သူတပါး အချိန်ပေးတာကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ သဘောမထားသင့်ဘူး။
၅။ အချိန်ဆိုတာ ဘုရားကတောင် မပေးနိုင်ဘူး။ ဘုရားက ဆုကျေးဇူး လက်ဆောင်တွေ အများကြီးပေးထားပါတယ်။ ဘုရားမပေးနိုင်တာက အချိန်ပဲ။ ဘုရားမှာ အချိန်မရှိဘူး။ လူကို အချိန်ပေးဖို့ ဘုရားက အသက်မပေးဘူး။ လူကို ကယ်ဖို့တော့ ကားတိုင်မှာ အသက်ပေးတာ မှန်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တော့ အသေခံမပေးတော့ဘူး။ လူကို အချိန်ပေးပေမယ့် သူ့အသက်ကို မထိတော့ဘူး။ တနည်းပြောရရင် လူကို အချိန်ပေးဖို့ ဘုရားက အသက်မပေးဘူး။ လူလူချင်း အချိန်ပေးတာကတော့ အသက်ပေးနေရတာပါ။ ဘုရားတောင် မပေးနိုင်တာကို ပေးနေကြရတာပါ။
၆။ အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ဘုရားတောင် မပေးနိုင်တာကို ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုနေတာပါ။ အချိန်ပေးကြတယ်ဆိုတာဟာ တခြားသူတွေကို မပေးပဲ အချင်းချင်းဝေမျှတာပါ။ ဘုရားကတော့
နေရာတိုင်းမှာရှိနေနိုင်တာပေါ့။ လူတယောက်ကို အချိန်ပေးဖို့ ဘုရားက တခြားသူတွေကို အချိန်ရုတ်သိမ်းထားဖို့ မလိုဘူး။ အချိန်ပေးတာဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေထဲမှာ အဲဒီအချိန်ကလေးအတွင်း ကိုယ့်ကို ထူးထူးခြားခြား ဂုဏ်ပြုတာပါ။
ဒါကြောင့် အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ကို ပေးနေတာပါ။ တချိန်မှာ တယောက်ကိုသာ ပေးပြီးတော့၊ ပေးပြီးသားကို ထပ်ပေးလို့ မရပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့၊ ချစ်လို့ ပေးတာမို့ ကြီးမြတ်တဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ခံယူတတ်ကြပါစို့။
လူတယောက်က " အရာရာကို ဘုရားတရားအကြည့်နဲ့ပဲ ဘာလို့ ကြည့်သလဲ၊ ခဏတာကလေးကိုတောင် ဘုရားတရားအကြည့်နဲ့ပဲ ကြည့်နေပုံရတယ်။ " လို့ မေးလာတယ်။
ကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင်သမျှထဲမှာ တန်ဖိုး အရှိဆုံးအရာဟာ အချိန်ကလေးတွေပဲ။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ကလေးတွေဟာ တန်ဖိုး အကြီးမားဆုံးပေးနေရတာပါ။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာတခုကို ကြီးမြတ်မှုတွေ၊ ကြီးမားမှုတွေနဲ့ မတိုင်းတာပဲ ပေးရတဲ့ အဖိုးအခနဲ့ဘဲ တိုင်းတာချင်ပါတယ်။ - အသက်ပေးနေရတာပါ။ ။
Posted by Papa at 10:11 PM
A Common Experience Pictures Our Common Salvation
( preached at Franklin Road Baptist Church, Murfreesboro, Tennessee, December 15, 1985 )
The Sword of the Lord မဂ္ဂဇင်းမှာသုံးဖို့ စာမူတခုပြီး တခုဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့၊ အရင်ကမသိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမ်းစာအသိတချို့ကို တအံ့တသြ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်တရားဟောစတုန်းက ဘယ်တော့မှမဟောဘူးလို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိဖူးပါတယ်။
၁။ ယောသပ်နဲ့ သူရဲ့ရောင်စုံကုတ်အင်္ကျီကလေးအကြောင်း ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ ဟောမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအကြောင်း ဟောထားတဲ့ တရားဟောချက်တွေ အများကြီးရှိနေပြီပဲ။
၂။ ဒံယေလနဲ့ ခြင်္သေတွင်းအကြောင်း ဘယ်တော့မှ ဟောမှာမဟုတ်ဘူး။ Sunday school မှာ ဒီအကြောင်း ခဏခဏကြားဖူးနေပြီပဲ။ စိတ်တောင်ပျက်လာပြီ။
၃။ ပျောက်သောသားအကြောင်း မဟောဘူး။ နိုးထမှုစည်းဝေးတိုင်းမှာ ပျောက်သောသားတပုဒ်တော့ ပါစမြဲပဲ။
၄။ " ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ် " You must be born again လို့ မဟောတော့ဘူး။ ဒါမျိုး အများကြီးကြားဖူးပြီပဲ။ ဒါမျိုး မဟောတော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ရင်းနှီးပြီးသားကျမ်းချက်တွေမှာ အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိနေတာ တွေ့လာရတယ်။
ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းကို ပုံဖေါ်ပြဖို့ မွေးဖွားခြင်းကိုသုံးတယ်။
ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းကို ပုံဖေါ်ပြဖို့ မွေးဖွားခြင်းကိုသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားအကြောင်းတွေ အများကြီးနဲ့လည်း ပုံဖေါ်ပြပါတယ်။ ဥပမာ - အနူရောဂါနဲ့ ကယ်တင်ခြင်းကို ပုံဖေါ်တယ်။ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ကျမ်းစာက နူနာကို ပျောက်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ပဲ ပြောတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်က ရောဂါသည်ကို ပျောက်စေတယ်။ သေသူကိုရှင်စေတယ်။ နူနာကို သန့်ရှင်းစေတယ်။ နူနာဟာ အပြစ်ကို ပုံဆောင်တယ်။ အပြစ်ဆိုတာ အနာပျောက်ဖို့ မလိုဘူး။ သန့်ရှင်းသွားဖို့လိုပါတယ်။
၁ပေ ၁း ၇ ကိုကြည့်ပါ။
" ဘုရားသခင်သည် အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ ငါတို့သည် အလင်း၌ကျင်လည်လျှင်၊ အချင်းချင်း မိသဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်၊ ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏။ "
ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ပုံဖေါ်ရာကို နူနာသန့်ရှင်းစေတဲ့ ဥပမာတမျိုးတည်းသာရှိမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် အနူမဟုတ်သလို၊ နူတဲ့လူတွေနဲ့လည်း မတွေ့ဖူးဘူး။ ဒီလို ဥပမာမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်သိပ်မရှင်းဘူး။
သမ္မာကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်းကို ပျောက်သောသား၊ အိမ်ပြေးကလေးနဲ့ ပုံဖေါ်ပြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အိမ်ပြေးမဖြစ်ဖူးသလို၊ ပျောက်သောသားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျမ်းစာထဲမှာ ဒီ ဥပမာတမျိုးပဲ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ရှိလို့ကတော့ ကျွန်တော် နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်မှ အိမ်ပြေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို မသိပဲ။
လူသားအားလုံး ကြုံဖူးတဲ့ မွေးဖွါးခြင်း
သမ္မာကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်းကို မွေးဖွားခြင်းနဲ့လည်း ပုံဖေါ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်များလဲ ? မွေးဖွါးခြင်းဟာ လူတိုင်းကြုံဖူးလို့ပါ။ လူတိုင်း ဒီလောကကို ဒီနည်းနဲ့ပဲ ရောက်လာကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ အမေတယောက်နဲ့ အဖေတယောက် ရှိတယ်။ အမေ ၂ ယောက် (ဒါမှမဟုတ်) အဖေ ၂ ယောက်ရယ်လို့ မရှိဘူး။ အမေမရှိခဲ့သူ၊ အဖေမရှိခဲ့သူရယ်လို့လည်း မရှိဘူး။ အမေတယောက်၊ အဖေတယောက်တော့ ရှိကြပါတယ်။
လူတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်ထဲရောက်ဖို့ တခါပြန်မွေဖွါးကြတဲ့အခါ၊ အားလုံးတခုတည်းသော အတွေ့အကြုံကို ကြုံကြရတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းဟာ အသင်းတော်တပါးမှာ နည်းတမျိုး၊ နောက် အသင်းတော်တပါးမှာတော့ တခြားနည်းတမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ ရှင်ယုဒက ပြောတယ်။ " ချစ်သူတို့ အညီအမျှ ဆက်ဆံသော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကို သင်တို့ထံသို့ ရေး၍ ပေးလိုက်ခြင်းငှါ ငါသည် အလွန်ကြိုးစားသည်တွင် ------ " တဲ့။ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ညီတူညီမျှဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ။
ညီတူညီမျှ မဖြစ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လူမှာ စွမ်းရည်တွေမတူကြဘူး။ မွေးရာပါ အစွမ်းအစတွေ မတူကြဘူး။ တနေရာတည်းလည်း မနေကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်တွေမှာ တူညီတာကတော့ ကယ်တင်ခြင်းပဲ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကယ်တင်ခြင်းက မွေးဖွားခြင်းနဲ့ တူတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ တူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံပါ။ လူတိုင်းဟာ ဒီတနည်းတည်း အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရကြတယ်။ Russia မှာနေနေ၊ တရုပ်ပြည်မှာနေနေ၊ အီဂျစ်တို့၊ Rutherford County တို့၊ Tennessee ပြည်နယ် - ဒါမှမဟုတ်၊ Georgia ပြည်နယ်မှာနေနေ၊ ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ရပ်ဟာ တနည်းထဲပါ။
မွေးဖွားခြင်းဟာ တိုင်းပြည်တခုနဲ့ ပါတ်သက်သွားစေပါတယ်။
လူတယောက်ဟာ တခါပြန်ပြီး မွေးဖွါးလိုက်ရင် သူဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ ယောဟန် ၃ မှာ --- "ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရ " တဲ့။ ဒါဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ခရစ်ယာန်ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ဒီလောကမှာ နိုင်ငံတော်ကြီး ၄ ခုရှိပါတယ်။ The mineral Kingdom သတ္တုလောက၊ သတ္တုနိုင်ငံ။ The Animal Kingdom တိရစ္ဆာန်လောက၊ တိရစ္ဆာန်နိုင်ငံ။ The Human Kingdom လူ့လောက၊ လူ့နိုင်ငံ။ The Divine Kingdom ဘုရားနိုင်ငံတော်၊ ဘုရားရဲ့တိုင်းပြည် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သတ္တုလောကကတော့ ရေနံတွေ၊ ဓါတ်ငွေ့တွေ၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ တခြားတွင်းထွက်တွေ ရတဲ့နေရာပါပဲ။
သစ်ပင်လောကကတော့ ရုံးပတီသီး၊ ပဲတောင့်၊ မုန်လာဥ၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အာလူးတွေ ရတဲ့နေရာပါပဲ။
တိရစ္ဆာန်လောကကတော့ အသားညှပ်မုန့်တွေ၊ အသား၊ ငါးတွေ ရပါတယ်။ ( ကျွန်တော်တော့ ဒါတွေစားရတာကြာလွန်းလို့ ခါးတောင်ကိုင်းနေပါပြီ။ )
လူ့လောက၊ လူ့နိုင်ငံ အကြောင်းတော့ ပြောဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာဆိုတာ သိပြီးသားပဲ။
နောက် - ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်။
ဘုရားသခင်က မပြောင်းလဲမဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေတခု ချမှတ်ထားတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေကတော့ - - - - နိမ့်တဲ့နိုင်ငံတခုကနေပြီး မြင့်တဲ့နိုင်ငံကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဝင်းစားချင်လို့ ဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူး။ သတ္တုလောကကနေ အပင်လောကကို ဝင်စားချင်လို့ မရဘူး။ တိရစ္ဆာန်လောကကနေ လူ့လောကကို ဝင်စားချင်လို့ မရဘူး။ လူ့လောက၊ လူ့နိုင်ငံကနေ ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲ ဝင်စားချင်လို့ မရဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ဝင်စားလို့ မရနိုင်ဘူး။
တဖက်ကလည်း မြင့်တဲ့နိုင်ငံကနေ ဆင်းပြီး၊ နိမ့်တဲ့နိုင်ငံက တခုခုကို အမြင့်နိုင်ငံဖက် ဆွဲယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဥပဒေတခုကို ဘုရားသခင်က ချမှတ်ထားပြန်တယ်။
ဥပမာ - - - ဟင်းသီးဟင်းရွက် အပင်တပင်စိုက်ရင် အမြစ်က မြေကြီးထဲဆင်းသွားပြီး၊ မြေဆီဓါတ်တွေ စုပ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပင်က မစုပ်ယူရင်တော့ အဲဒီဓါတ်တွေဟာ တဆင့်တက်ချင်လို့ မရနိုင်ဘူး။ နောက် - နွားမက ပဲပင်ကို စားတယ်။ သစ်ပင်ကို တိရစ္ဆာန်လောကထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တာပါပဲ။ နောက်တော့ - အဲဒီနွားမကို နို့ညှစ်တယ်။ နွားမကို သတ်ပြီး အသားညှပ်မုန့်တွေ လုပ်ကြတယ်။ အဲဒါဟာ တိရစ္ဆာန်လောကကို လူ့လောကထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တာပါပဲ။
ကျွန်တော် အဓိကပြောချင်တာက - - - နိုင်ငံတိုင်းဟာ အနိမ့်ကိုဆင်းပြီး၊ တခြားနိုင်ငံတခုကို ကိုယ်နိုင်ငံထဲ ဆွဲတင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ သူဟာသူ အမြင့်ကို ဝင်စားနိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ ဒါကို ထပ်ရှင်းပြဖို့ မလိုလောက်ပါဘူး။
ကျွန်တော် ရိုးရိုးကလေး ထောက်ပြနေတာက - လူဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ် သူ့ဟာသူ မကယ်နိုင်ဘူး။ ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်းနိုင်တယ်။ မင်္ဂလာဝတ် ၇ ပါးကို စောင့်ထိန်းနိုင်တယ်။ နှစ်ခြင်းခံနိုင်တယ်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းဟန်ပြနိုင်တယ်။ အသင်းတော်မှာ ပါဝင်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဘဝကို ရွက်သစ်ပြောင်းသလို ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုမြင့်တဲ့ - နိုင်ငံကိုတော့ ဝင်စားနိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ ဝင်စားဖို့ တနည်းတည်းကတော့ ဘုရားသခင် ဆင်းလာပြီး ကိုယ့်ကို ဆွဲတင် ဆောင်ယူမှပဲ ဖြစ်မယ်။ " ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရ။ "
မွေးဖွားခြင်းက လူ့ရဲ့သဘာဝကို သတ်မှတ်တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဇာတိမြေမှာတုန်းက နွားနဲနဲ နဲ့ အပျော်စီးဖို့ မြင်းနဲနဲ ရှိဖူးတယ်။ နွားမတကောင် ကလေးမွေးတိုင်း လေ့လာမိတယ်။ ဘယ်လိုမှ မလွဲဘူး။ နွားကလေးပဲမွေးတယ်။ နွားမတကောင်က ဆိတ်ထီးကလေး မမွေးဘူး။ အပျော်စီး မြင်း ၂ ကောင်က ခွေးကလေး မမွေးဘူး။ မြင်းက မြင်းပဲ မွေးတယ်။
အခုလဲ လူတယောက်ဟာ တခါထပ်မွေးမယ်ဆိုရင် တခြားသဘာဝတမျိုးကို ရပါတယ်။
ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပြဿနာဖြစ်နေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝကြောင့် ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား။ လူတယောက်ကို ခင်ဗျားက ပြောမယ်။ " ဖြောင့်ဖြောင့် လျှောက်၊ မှန်တာလုပ်၊ ကောင်းကောင်းနေ၊ မနေရင် ငရဲသွားလိမ့်မယ်။ " ဆိုပါတော့။ ခင်ဗျားပြောတဲ့စကား ခင်ဗျားသိပုံတော့ ရသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် လူသေကို ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်။ ခရစ်တော်မပါရင် လူသေပဲလေ။ အပြစ် ဒုစရိုက်ထဲမှာ သေနေတယ်။ ပိုကောင်းလို့ ကယ်တင်ခြင်း မရဘူး။ ပိုကောင်းဖို့သာ ကယ်တင်ခြင်းရတာပါ။
ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ခင်ဗျား ပြဿနာက အပြစ်လို့ ထင်ချင်ထင်မယ်။ အပြစ်အကြောင်း တရားဟောတာ ကြားဖူးနေပြီပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ခင်ဗျားရဲ့ ပြဿနာက အပြစ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ယောဟန် ၁၆း ၈၊ ၉ မှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အကြောင်း ဖတ်ရတယ်။ " ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာလျှင်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်း၊ လောကီသားတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူမည်။ " တဲ့။ မရှင်းဘူးလား။
ပြဿနာက အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုး၊ မကိုးက အဓိကပါ။ သခင်ယေရှုကို တခါအားကိုးရင်၊ အပြစ်ပြဿနာ - ဒါမှမဟုတ် - အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းဟာ ထာဝရအတွက် ပြီးသွားပါပြီ။ သခင်ယေရှုက သင့်အပြစ်အားလုံးကို သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ သယ်ဆောင်သွားခဲ့သလား၊ ဘာမှမသယ်ခဲ့ဘူးလား။ တခု - ခု ပြောရမှာပေါ့။ လုပ်ခဲ့သမျှ အပြစ်အားလုံးနဲ့၊ နောင်လုပ်မိဦးမယ့် အပြစ်တွေအတွက်ပါ အသေခံခဲ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပြဿနာဖြစ်နေတာက အပြုအမူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် သခင်ယေရှုက " ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ - - - " လို့ပြောရတာပေါ့။ " ကောင်းကောင်း မနေသောသူ မည်သည်ကား - - -" လို့ မပြောဘူး။ " ရွက်သစ်ပြောင်းသလို၊ ဘဝသစ် မပြောင်းသောသူ မည်သည်ကား - - -" လို့ မပြောဘူး။ ဘဝကို ရွက်သစ်ပြောင်းသလို၊ ပြောင်းအောင် ကြိုးစားလုပ်နေဖို့မလိုဘူး။ ဘဝ အသစ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ နေ့တိုင်း သစ်ရွက်တရွက် ပေးမယ်ဗျာ။ နေမဝင်ခင် ညှိုးခြောက်သွားမှာပဲ။
လူတိုင်း အားနည်းတတ်ပါတယ်။ မှားတတ်ပါတယ်။ ၂၄ နာရီ တရက်ထဲမှာကိုပဲ၊ စုံစုံလင်လင်နေနိုင်သူရှိသလား။ ရှိရင်တော့ မြင်ဖူးချင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတွင်းမှာပဲ စုံစုံလင်လင်နေနိုင်သူကော ရှိမလား။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တနာရီတောင် စုံစုံလင်လင်နေနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ကိုယ် သတိမထားမိတာကလေးတွေတောင် အပြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ် မဟုတ်လား။ " ကောင်းသောအကျင့်ကို သိလျှက်၊ မကျင့်ဘဲနေသောသူသည် အပြစ်ရှိ၏။ " ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပြဿနာဖြစ်နေတာက အပြုအမူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝပါ။ အပြုအမူတွေပြင်ပြီး သဘာဝလိုက်ပြောင်းဖို့ ဘုရားသခင်က မတိုက်တွန်းဘူး။ သဘာဝပြောင်းပေးပြီးမှသာ၊ အပြုအမူတွေပြောင်းစေပါတယ်။
ယုံကြည်သူရဲ့ အသက်တာမှာ အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံး ၂ လုံးရှိပါတယ်။ BE ဖြစ်သည်နဲ့ DO လုပ်သည် ဆိုတဲ့ စကားတွေပါ။ BE ဖြစ်သည်က DO လူပ်သည်ထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ BE ဖြစ်သည်က၊ DO လုပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပေးလို့ပါ။ လုပ်လို့ ကိုယ့်မှာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်မိတာပါ။
ဟောင်လို့ ခွေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ခွေးဖြစ်လို့ ဟောင်တာပါ။ တချို့ခွေးတွေထက် ကျွန်တော် ပိုဟောင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟောင်လို့ ခွေးဖြစ်မသွားပါဘူး။ အသင်းတော်ထဲမှာ တချို့သူတွေက သူများထက် ပိုကောင်းအောင် နေနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေလို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါထပ်မွေးဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက သဘာဝကို အဓိကထားတယ်။ သဘာဝပြောင်းရင်၊ အပြုအမူပြောင်းလာမှာပါ။ သဘာဝက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ မွေးဖွားခြင်းက သဘာဝကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
တခါထပ် မွေးဖွါးပြီးတဲ့သူဆိုရင် ၂ပေ ၁း ၄ - မှာ ဘုရားသဘာဝကို ရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အံ့သြစရာ အချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော် ၁၁ နှစ်သားမှာ ကယ်တင်ခြင်းရတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ဘာမှ မပြောင်းလဲစေဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ - - " ငါ ကယ်တင်ခြင်းရတော့ အကုန်လုံး ကယ်ပြစ်လိုက်ပြီ " လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ မှားပါတယ်။ အဲဒီလိုသာ အကုန်လုံး ကယ်ပစ်ရင် ကျွန်တော်တို့ နှဖူးတွေ ဘယ်ပြောင်လာမလဲ။ သွားဆရာဝန်တွေလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ မျကိမှန်တတ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ပါးရေ နားရေတွန့်စရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကျမ်းစာက - - " ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိကတိဖြစ်၏။ " တဲ့။ အသွေးအသားက၊ အသွေးအသားပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။
သဘာဝကို ပြောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ ဘုရားသခင် မပြောဘူး။ အသစ်စက်စက် သဘာဝတခု အပိုထည့်ပေးတဲ့
အကြောင်းသာ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသစ်စက်စက် သဘာဝက အဟောင်းသဘာဝကို ဖျက်မပစ်ဘူး။ သခင်ယေရှုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် မတွေ့မချင်း ကိုယ်ခန္ဓာကို မရွေးနှုတ်သေးဘူး။ ရွေးနှုတ်မယ့်နေ့ကတော့ တကယ် ပျော်စရာကောင်းမယ့် နေ့ပဲ။ ဘုရားသခင်ကို ဖူးတွေ့ကြရမယ့်နေ့မှာ ကိုယ်တော်နဲ့ တူခွင့်ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ပေါလုက - - " ငါသည် ငြို ငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤ အသေကောင်မှငါ့ကို အဘယ်သူကယ်လွှတ် မည်နည်း။ " ( ရောမ ၇း ၂၄ ) ရှင်ပေါလုက " ဒီသဘာဝက ငါ့ကို သွေးဆောင်နှောက်ယှက်တယ်။ အားနည်းစေတယ်။ မှားယွင်းစေတယ်။ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ဒီသဘာဝကို ဖယ်ပစ်ချင်တယ် " လို့ ပြောတာပါ။
Buddy Robinson ကျွန်တော် လူဖြောင့်တယောက် ဖြစ်ချင်တယ်။ လုံးဝ စုံလင် သန့်ရှင်းပြီး၊ အပြစ် လုပ်တတ်တဲ့ သဘာဝ အဟောင်းကို ဖယ်ပစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသဘာဝကို အခု မပယ်ချွတ်နိုင်ကြသေးဘူး။ ၁ ယော၁း ၁ - ၂ မှာ " ကိုယ် အပြစ်မရှိဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင်၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် လှည့်ဖြားကြ၏။ ငါတို့၌ သစ္စာတရားမရှိ။ "
မွေးဖွါးခြင်းက သဘာဝကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်တယ်။ Nature determines our appetite.
ခဏဆက်စဉ်းစားရအောင်။ သဘာဝဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းက သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်တယ်။ သိန်းငှက်စားတာကို ကြက်တူရွေးက မစားဘူး။ ကြက်တူရွေးကလေးတကောင် ထိုးဆင်းလာပြီး၊ လယ်ကွင်းထဲက ကြွက်တကောင်ကို သူ့ခြေသည်းနဲ့ ကုတ်ယူသွားတာ မြင်ဖူးကြသလား။ ဒါမျိုးကြက်တူရွေးဆို ကျွန်တော်တော့ ဝေးဝေးပဲ နေတော့မယ်။
တည ကျွန်တော် ကားမောင်းရင်းနဲ့ စွန်လား၊ သိန်းငှက်လားမသိ သစ်ပင်ပေါ်မှာ မြင်လိုက်ရတယ်။ သူက မြက်တောထဲက လှုပ်နေတဲ့အရာကို မြင်တယ်။ ထိုးဆင်းလာပြီး၊ ခြေသည်းနဲ့ ကုပ်ယူသွားတယ်။ သတ်စားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကျတော့ အဲဒါမျိုး မစားချင်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သိန်းငှက်တို့၊ စွန်တို့က ဒါမျိုးကို သဘောကျတယ်။ သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်ပေးတယ်။
ကျွန်တော် ကလေးဘဝတုန်းက ဘုရားကျောင်း ခဏခဏ သွားတယ်။ ဒီကျမ်းစာကို ဖတ်တာပဲ။ ကျမ်းစာကို ကျွန်တော် မစွဲလမ်းဘူး။ ကျမ်းစာကို မဆာငတ်ဘူး။ သင်းအုပ်ဆရာ တရားဟောပြီးရင်၊ ကျွန်တော့် အဖွါး ဝေဖန်တာ ကြားဖူးတယ်။ " ဒီညတော့ ငါ့ဝိညာဉ် တကယ် အစာဝတယ်ဟေ့။ " ကျွန်တော်က " အဖွါးတော့ ရူးပြီ။ အဖွါးကို သေသေချာချာ ပြောဦးမှပဲ။ အဲဒီမှာ ဘယ်သူမှလဲ မရှိဘဲနဲ့၊ အိမ်က အသားညှပ်ပေါင်မုန့်မှာလည်း ဒိန်ခဲ မပါတာတောင် အတော်ကြာပြီပဲ။ ဒါနဲ့များ - ငါ့ ဝိညာဉ် အစာဝတယ်လေး၊ ဘာလေးနဲ့၊ ဘာပြောတာပါလိမ့် " လို့ စဉ်းစားဖူးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါ၊ သဘာဝ အသစ်တခုရလာတယ်။ ဘာဖြစ်သွားသလဲ မသိပေမယ့်၊ ဘုရားကျောင်းတက်ရတာ ပျော်စပြုလာတယ်။ ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုလည်း သဘောကျလာတယ်။ အကုန်မဖတ်နိုင်သေးပေမယ့်၊ " သိပ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပဲ၊ ဝိညာဉ်ခွန်အားရတယ်၊ အစာစားရတယ် " လို့ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် ပြောလာတယ်။ အခုတော့ အဖွားစကားကို နားလည်သွားပြီ။
သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်ပေးတယ်။
ကျွန်တော်တော့ အချစ်ဝတ္ထုတွေ လုံးဝမကြိုက်တတ်ဘူး။ တချို့တော့ မိုးအလင်းထိုင်ဖတ်တတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော် အာသီသကတမျိုး၊ ကိုယ့်ကို ခွန်အားပေးမယ့် စာပဲဖတ်ချင်တယ်။ သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
သဘာဝက အပေါင်းအသင်းကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ Nature determines our associations.
" အရောင်တူတဲ့ ငှက်တွေဟာ အတူနေတတ်ကြတယ် " ဆိုတဲ့စကား ကြားဖူးကြမှာပါ။ ( Birds ofafeather flock together. ) အဲဒါမှန်ပါတယ်။ ဒီ Tennessee ပြည်နယ်မှာ ငုံးတွေ၊ ခါတွေနဲ့ တခြားငှက်တွေ မြင်ဖူးပါတယ်။ ငုံး ၇ကောင်။ ၈ကောင်လောက် လမ်းဖြတ်ပြေးတာလည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငုံး ၂ကောင်၊ ငှက်နီ ၁ကောင်၊ ငှက်ပြာတကောင်၊ သိန်းငှက်တကောင်၊ ကျီိးကန်းတကောင်၊ တောကြက်တကောင် အုပ်ဖွဲ့ပျံလာကြတာ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ငုံးသပ်သပ်၊ ငှက်နီသပ်သပ်၊ ငှက်ပြာသပ်သပ်နေတတ်ကြတာပါ။
ချိုးငှက်ဖမ်းတဲ့ရာသီတုန်းက ချိုးငှက်တွေ အုပ်ဖွဲ့ပြန်သွားတာ မြင်ဖူးပါတယ်။ သူတို့အထဲမှာ ကျီိးကန်း၊ သိန်းငှက်၊ စွန်ရဲနဲ့ တိုက်ကြက်တွေ မတွေ့ရဘူး။ ချိုးငှက်တွေ ဘာကြောင့်အုပ်စုဖွဲ့ပျံကြသလဲ။ သူတို့မှာ တူညီတဲ့ ချိုးငှက်သဘာဝရှိကြလို့ပါ။ မြင်းတွေက မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ဘာကြောင့် အတူလမ်းလျှောက်ကြသလဲ။ သူတို့မှာ တူညီတဲ့ မြင်းသဘာဝရှိကြလို့ပါ။ ခွေးတွေက ဘာကြောင့် တောအုပ်ထဲပြေးပြီး ခွေးလိုဟောင်ကြသလဲ။ သူတို့အားလုံးမှာ ခွေးသဘာဝရှိကြလို့ပါ။
ကြောင်တကောင်ဟာ ဘာကြောင့် ခွေးနဲ့အတူ တောထဲလိုက်တာ မြင်ဖူးသလား။ ခွေးလိုကော ဟောင်ပါသလား။ သားကောင်ကော လိုက်ချောင်းပါသလား။ လိုက်ချောင်းရင်တော့ အဲဒီကြောင်ကို လမ်းမပေါ်ချ စီးပွါးရှာကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်တော့ ဘုရားကျောင်းသွားတတ်သူတွေနားမှာ နေရတာကို ပျော်ပါတယ်။ သီချင်းကောင်းကောင်းလည်း နားထောင်ချင်တယ်။ တချို့သူတွေ နားထောင်တဲ့ သီချင်းမျိုးတွေကိုတော့ နားထောင်နိုင်တာပဲ အံ့သြမိတယ်။ သီချင်းလို့ သူတို့ပြောတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ လက်ရာထဲမှာ တသံနဲ့တသံကလည်း မပြေမလည် ဖြစ်နေတယ်။
ကယ်တင်ခြင်းရသူတွေနားမှာ နေရတာ ပျော်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဓမ္မသီချင်း ဆိုသူတွေကြားမှာနေရတာ သဘောကြပါတယ်။
သဘာဝက အပေါင်းအသင်းကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
သဘာဝက ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ Nature determines our environment.
သိန်းငှက်တွေက လေမှာပျံဝဲတယ်။ လင်းပိုင် ( လပိုင် ) တွေကတော့ ပင်လယ်မှာ ရေကူးကြတယ်။ လပိုင်က ရေမှာ ကျင်လည်တာ သူ့သဘာဝမို့ပါ။ သိန်းငှက်လည်း လေမှာ ကျင်လည်တာ သူ့သဘာဝမို့ပါ။
လူတချို့ဟာ မီးခိုးတွေ မွန်းနေတဲ့ ညကလပ်မှောင်မှောင်တွေကို ဘာကြောင့် သွားကြသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ အဲဒီလိုနေရာတွေရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ကျွန်တော်တည်းဖူးပါတယ်။ လူတွေက အဲဒီအမှောင် ညကလပ်တွေမှာ သောက်စား မူးထားကြတော့၊ သူတို့ ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင် မသိကြတော့ဘူး။ မနက်ရောက်လို့ နိုးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ခေါင်းက စည်ပိုင်းလောက် ကြီးနေပြီ။ ညက ဘယ်မှာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ကြတော့ဘူး။
လူတယောက် ညကလပ်ကနေ ညနက်မှ ပြန်တတ်တယ်။ သူက အိပ်ရင် ဟောက်တတ်တယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက သူ့မိန်းမကို သူ့နှာခေါင်းမှာ ဖဲကြိုးပြာတတ်ထားရင် အဟောက်ရပ်မယ်လို့ ပြောပြကြတယ်။
ဒါနဲ့ မနက် ၃ နာရီလောက် သူပြန်လာတော့ စ, ဟောက်ပါရော။ သူ့မိန်းမက သူ့နှာခေါင်းကို ဖဲကြိုးပြာနဲ့ ချည်တယ်။ မနက် သူအိပ်ရာထတော့ အညောင်းဆန့်ပြီး မှန်ကြည့်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အမျိုးသမီးလည်း နိုးလာတော့ " ရှင်ညက ဘယ်သွားလဲ" လို့ မေးပါတယ်။ သူက - " မသိတော့ပါဘူးကွာ၊ ဒါပေမယ့် ငါ ပထမရတယ် " လို့ ဖြေပါတယ်။
အဲဒီလိုနေရာတွေကို သွားတတ်သူတွေဟာ ညက ဘယ်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ မသိကြတော့ဘူး။ ဒါကိုပဲ ရီစရာအဖြစ် သဘောထားကြပြန်တယ်။
ကိုကင်း သုံပြီး၊ တနေ့ကို ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက် ဖြုန်းနေတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ ရီစရာ ဖြစ်ပါ့မလား။
ညတုန်းက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မုန်လာဥတွေ၊ ပဲတောင်တွေ၊ ပေါင်မုန့်တွေနဲ့ တခြား အစားအသောက်ကောင်းတွေ စားရတယ်။ ဒါမျိုးတွေ မကြိုက်တတ်ရင် ရွေးနှုတ်မခံရသေးလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကောင်းကင်မန္နမုန့်ဟာလည်း အခု အစားသောက်ကောင်းတွေလိုပဲ ကောင်းမှာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ မစားရရင် ကျွန်တော် မပျော်ဘူး။ ကောင်းကင်မှာ မပျော်ပဲ နေရတာမျိုးလည်း စဉ်းစားလို့တောင် မရနိုင်ဘူး။
သဘာဝက အာသီသကို သတ်မှတ်တယ်။ အပေါင်းအသင်းကို သတ်မှတ်တယ်။ ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်မှတ်တယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင် အသစ်သော သဘာဝကို ရတယ်။ ခုဏ ပြောတဲ့ နေရာတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ မပျော်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲဒီမှာ နောက်ထပ် မကျင်လည်တော့ဘူး။
မွေးဖွါးခြင်းဟာ လူတယောက်ကို အမှောင်ထဲကနေ အလင်းကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
Birth Brings One From Darkness to Light.
မွေးဖွါးခြင်းဟာ လူတိုင်းကြုံရရုံ၊ နိုင်ငံတခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ရုံ၊ သဘာဝကို သတ်မှတ်ရုံသာမက၊ ကလေးငယ်ကို အမှောင်ထဲကနေ အလင်းထဲ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ၉ လ လုံးလုံး အမှောင်ထဲနေရာကနေ ရုတ်တရက် အလင်းထဲ ရောက်လာစေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုပဲ ပြန်ရှင်းပြပါဦး။ သခင်ယေရှုကို အားမကိုးဖူးသေးတဲ့ လူတယောက်က ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ " ငါ နားမလည်ဘူး၊ နားမလည်ဘူး။ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး" လို့ပြောမယ်။ နောက် သူ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး၊ ကျမ်းစာ စ,ဖတ်တော့ " အေး၊ ဟုတ်တယ်ဟ။ ငါ နားလည်ပြီ။ " လိုပ ပြောတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ အမှောင်ကနေ အလင်းထဲ ရောက်သွားတာပါ။
ကျွန်တော်ကို ရှင်းပြကြည့်ပါ။ John Kennedy လို Harvard တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ဘွဲ့ရ ထက်ထက်မြက်မြက် လူတယောက်က သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်းမှာ ဆွံ့အနေတာ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကို လုံးဝ အပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ ထင်တာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းဟာ မိန်းမမယူရဘဲနဲ့ ၊ သူက ဘာကြောင့် ပေတရုကို ပထမဆုံး ပုပ်ရဟန်းမင်းလို့ ယုံနေခဲ့တာလဲ။ ကျမ်းစာကတော့ ပေတရုရဲ့ ယောက္ခမအကြောင်း ပြောထားတယ်။ ပေတရုမှာ မိန်းမမရှိဘဲ၊ ယောက္ခမ ရှိပါ့မလား။
Catholic ကက်သိုလစ် အသင်းတော်အကြောင်း လေ့လာရင်၊ အဲဒီ အသင်းတော်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကက်သိုလစ်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ နေရာမှန်သမျှဟာ ကမ္ဘာမှာ အဆင်းရဲဆုံးဆိုတာ တွေလာမှာပါ။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို သွားကြည့်ပါ။ ကက်သိုလစ် အသင်းတော်က အကြီးအကျယ် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေချိန်မှာ လူတွေ ငတ်နေကြတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းက အလှူငွေတွေကို ချုပ်ကိုင်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကို အဲဒီလူတွေက ဘာကြောင့် တိတ်တိတ်နေကြသလဲ။ Born again မဖြစ်သေးလို့၊ တခါထပ် မမွေးရသေးလို့ပါ။ မမွေးသေးတော့ အမှောင်ထဲမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်။ တခါထပ် မွေးပြီးရင်တော့ အမှောင်ကနေ အလင်းထဲ ရောက်လာပါတယ်။
မွေးဖွါးခြင်းက အတိတ်ကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်။ Birth Cancels Out the Past.
မွေးဖွါးခြင်းက ကလေးငယ်ကို အမှောင်ထဲကနေ အလင်းထဲ ပို့်ပေးရုံသာမက၊ ကလေးကို အတိတ်သမိုင်းမပါပဲ၊ မွေးဖွါးလာစေပါတယ်။
ကောင်းကင်မရှိ၊ ငရဲမရှိဘူး ဆိုရင်တောင်၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံချင်နေဦးမှာပါပဲ။ အတိတ်ကို ချေဖျက်ပေးဖို့ လိုတယ်လေ။ ကျွန်တော် အခုသေပြီး၊ ကောင်းကင်ရောက်လို့ ဘုရားသခင်ကို၊ " ကျွန်တော်ပြစ်မှားမိတဲ့ အပြစ်တွေအတွက် ဝမ်းနည်းပါတယ် ကိုယ်တော် " လို့ပြောရင်၊ ဘုရားသခင်က " မင်းပြောတဲ့ ကိစ္စ ငါမသိပါလား " လို့ ဖြေလိမ့်မယ်။ " တကယ်ပါ ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တော် သိပါတယ်။ ကိုယ်တော်က အားလုံးသိတာပဲ။ အဲဒီအပြစ်တွေအတွက် ၄၅ နှစ်လုံးလုံး ကျွန်တော် စိတ်ပူနေခဲ့ရတာ၊ ကိုယ်တော် သိပါတယ်လေ၊ အဲဒီအပြစ်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ " လို့ ပြောမိမှာပါ။ ဘုရားသခင်ကတော့ " Curtis မင်းပြောတဲ့ ကိစ္စ ငါမသိဘူးကွ၊ " လို့ ဆက်ပြောနေမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ? ဟေရှာယ ၄၃း ၂၅ မှာ " ငါတပါးတည်းသာလျှင် ကိုယ်အတွက်ကြောင့်၊ သင်၏ အပြစ်တို့ကို ဖြေမည်။ သင်၏ ဒုစရိုက်အမှုတို့ကို မအောက်မေ့။ "
ဒီအချက်ဟာ အံ့သြစရာ မကောင်းဘူးလား ? ။ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းတွေ၊ ကိုယ့်ဇနီး၊ ကိုယ့်ယောင်္ကျားက အပြစ်တွေကို မှတ်မိနေပေမယ့်၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ အပြစ်တွေကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘုရားသခင် မ,စလို့ အပြစ်တခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့သူလို ဖြစ်ရတယ်။ ဘုရားသခင် ဖြောင့်မတ်သလို၊ ဖြောင့်မတ်ရတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာက လူဟာ ကယ်တင်ခြင်းရရင် ဖြောင့်မတ်ပြီလို့ ပြောတယ်။ တဝက်တပျက် ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အပြည့်အဝ ဖြောင့်မတ်တာပါ။ အားလုံး လွင့်သွားပြီ။ အပြစ်ပြုတဲ့ အတိတ်မရှိတော့ဘူး။ ဟာလေလုယာ။
ကလေးတယောက်ဟာ အတိတ် သမိုင်းမပါဘဲ မွေးဖွါးတယ်။
လူတယောက်ယောက်ကို ရဲက၊ အရာရှိက ဖမ်းတာ ဆီးတာ မမြင်ရတဲ့ အခြေအနေ နေရာ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တနေရာက အသုဘအိမ်ပါ။ ရဲအရာရှိတယောက် ဝင်လာပြီး၊ အလောင်းကို လက်ထိပ်ခတ်၊ ဆွဲထုတ်ပြီး၊ ထောင်ထဲပို့လေ့ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ? သေနေပြီလေ။
နောက်တနေရာကတော့ ဆေးရုံက သားဖွါးခန်းပါ။ ရဲအရာရှိတယောက် စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုးနဲ့ ဝင်လာပြီး၊ ၃ နာရီလောက်ပဲ သက်တမ်းရှိသေးတဲ့ ကလေးကို လက်ထိပ်ခတ်ပြီး - " မင်းကို လူသတ်မှုနဲ့ ငါတို့ သံသယရှိတယ် " လို့ ပြောပါ့မလား ? ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကဲ - မာနတ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းမရခင်က အပြစ်တွေအတွက် လာမဖမ်းနိုင်ပါဘူး။ အတိတ်မရှိတော့ဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းရတော့ ကျွန်တော့ အတိတ်ဟာ လုံးဝချေဖျက်ခံလိုက်ရပြီ။ ဘုရားရဲ့ စိတ်ထဲမှာတောင် မရှိတော့ဘူး။
မွေးဖွါးခြင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ Birth is complete.
မွေးဖွါးခြင်းဟာ အတိတ်ကို ချေဖျက်ရုံသာမက ပြီးပြည့်စုံမှုလည်း ရှိုပါတယ်။
တခြားသွန်သင်ချက်တွေက " နှစ်ခြင်းတွေလည်း ကောင်းသားပဲ၊ ဒါပေမယ့် တဖက်စွန်းမရောက်နဲ့၊ မင်း ကယ်တင်ခြင်းရတာ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါလည်းလိုသေးတယ်။ ဟိုဟာလည်း လိုသေးတယ်။ တခြားဟာတွေလည်း လိုသေးတယ်။ " လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းရရင် လိုတာအားလုံးရလိုက်ပြီ။
ကျွန်တော့ သားသမီး ၄ ယောက်လုံး စုံစုံလင်လင် မွေးဖွါးလာကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးက - - - " သား Tony ကို ဆရာဝန် ပြန်ပြဦးမှပဲ။ ဆေးမှတ်တမ်းအရှည်ကြီး ပြန်ယူဦးမှ၊ သူ့နားရွက်ကလေး ပြန်တပ်ပြီး၊ သူ့လျှာကလေးလည်း ပြန်တပ်ဦးမှ " လို့ ပြောလေ့မရှိဘူး။ ဒါတွေက သား Tony မှာပါပြီးသားပဲ၊ စုံလင်ပါတယ်။
အသစ်တဖန်မွေးဖွါးတဲ့အခါမှာလည်း စုံလင်ပါတယ်။ သား Tony မှာလိုတာက ကြီးထွားဖို့ အစားအစာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ သင်တော်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ လိုတာပါ။ မွေးလာတဲ့ ကလေးတိုင်း ဒီလိုပါပဲ။
အသက်တာကြီးထွားဖို့ရာ ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဓါးကိုယူ၊ ခရင်းကိုထုတ်၊ သင်းအုပ်ဆရာ တရားဟောတော့မယ်၊ စားလိုက်တော့၊ စားကောင်းရင်၊ " ကောင်းတယ်ဗျို့၊ ထပ်ပေးပါဦး " လို့ပြော။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြည့်နဲ့ နေပါ။
ကျွန်တော့ သမီး Donna ကတော့ စားပွဲနား လာလှုပ်လေ့ရှိတယ်။ စားသောက်ရတာကို သူ စိတ်လှုပ်ရှားလေ့ ရှိတယ်။ စားပွဲအောက်က သူ့ခြေထောက်လည်း လှုပ်နေလိမ့်မယ်။ စားပွဲတခုလုံး လှုပ်နေလိမ့်မယ်။
ခွေးတကောင်ကို အစာကျွေးတဲ့အခါ အမြီးလှုပ်တာ စောင့်ကြည့်ဖူးသလား။ မြင်းစာခွက်မှာ မြင်းစာကျွေးရင် မြင်းမြီး လှုပ်ခါနေတာ မြင်ဖူးသလား? ။
ဘုရားကျောင်းလာတာဟာ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး အစားအသောက်ကို စားဖို့လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့က ခေါင်းထဲက သန်းတွေ အသေကျလာသလိုပဲ လာနေကြတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက - - - နှုတ်ခမ်းကို သပ်လိုက်၊ ပြီးတော့ " ဘုရားသခင် ဘုန်းကြီးပါစေ "လို့ပြော။ သီချင်းဆိုပြီဆိုရင် " ပန်းကန်ထဲမှာထည့်၊ စားဖို့ အသင့်ပဲ " လို့ပြောပါ။ အဲဒီလိုမှ အသက်တာ ကြီးထွားပါတယ်။
ကလေးဟာ ပြီးပြည့်စုံစွာ မွေးဖွါးလာပါတယ်။
မွေးပြီဆိုရင် ပြီးပြီ။ Birth is Final.
မမွေးခဲ့ရင် ကောင်းမယ် လို့ ပြင်ချင်လည်း မရတော့ဘူး။ တချို့က ကျေးဇူးတရားကနေ ရွေ့လျော့တယ် Falling from grace လို့ ဘာကြောင့် သင်ကြလဲ မသိဘူး။ သူတို့က " ခင်ဗျား အခု သိပ်ကောင်းတယ်၊ နောက် - အားနဲရင် ဆုံးရှုံးမယ်၊ နောက် - ပြန်ကောင်းရင် ပြန်ရမယ်၊ ပြန်အားနဲရင် ပြန်ရှုံးပြန်မယ် " တဲ့။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တော့ နားမလည်တော့ဘူး။ အမှန်က မွေးတယ်ဆိုတာ အပြီးပါ။
ဆိုပါစို့၊ ကျွန်တော့်သမီးကလေး မွေးတော့ သမီးကိုကြည့်ပြီး၊ ဇနီးသည် Gerri ကို " သမီးမျက်နှာကို ငါ သိပ် သဘော မကျဘူးကွာ။ ဗိုက်ထဲ ပြန်ထည့်၊ အစကနေ ပြန်စကွာ " လို့ ပြောလိုက်မယ်။
ပြန်စလို့ မရဘူး။ မမွေးခဲ့ချင်လို့မရဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ သားသမီး ၄ ယောက်၊ သမီး ၃ ယောက်၊ သားတယောက်။ မြေးက ၆ယောက်။ ( အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ) အားလုံး ကျွန်တော့ သားမြေးတွေပါ။ ဒါကို အချိန်နဲ့ ထာဝရကာလ က မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့် သားသမီးတွေကို ဆိုက်ဘေးရီးယား ကိုပို့၊ နာမည် ၄၇ မျိုးလောက် ပေးပစ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြောင်းပစ်၊ တခြား အဖေတယောက်၊ အမေတယောက်ရှိတယ် လို့ ယုံအောင်လုပ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ သူတို့ အဖေ၊ Geraldine Crawford Hutson ဟာ သူတို့အမေဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြောင်းပစ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါက အပြီးပဲ။
ကျွန်တော် ၁၁ နှစ်သား အရွယ်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရတော့ ဒါဟာ အပြီးပါပဲ။ မာနတ်နဲ့ မရဏာနိုင်ငံက လာပြောင်းပစ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ တရားဟောဆရာတယောက်ကလည်း လာပြောင်းပစ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ အကြီးအကျယ် အော်ဟစ်၊ ထခုန်၊ မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ ထွေးပြီးမှ " မင်း မှန်မှန်ကန်ကန် အသက်မရှင်ပါဘူးကွာ " လို့ ပြောလည်း၊ ကျွန်တော့်ကို ဘုရားသခင်က ပိုင်သွားပါပြီ။
ကျွန်တော့် သားသမီးတွေထဲမှာ ဘယ်သူမှ အချိန်ပြည့် မကောင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ခဏခဏ မပြေလည်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ ကြီးကြီးမားမား မထိမခိုက်မချင်း သူတို့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ နေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့သိကြပါတယ်။ အချိန်ပြည့် ကစားကြမယ်။ သူတို့ကို မရိုက်ခင် လူကြီးက " မလုပ်နဲ့ " လို့ ဘယ်နှစ်ခါ တားတယ်ဆိုတာလည်း သိကြပါတယ်။ မရိုက်ခင် " မလုပ်နဲ့ " လို့ ရှစ်ခါတားရင်၊ ခုနှစ်ခါလောက်တော့ အော်ပြောနေရမှာပဲ။ ကလေးတွေ မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေက ကလေးတွေကို အော်တာကြားဖူးပါတယ်။ " အဲဒါ မလုပ်နဲ့ ၊ ငါ့ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးနေကြတာ၊ " အဲဒါ မလုပ်နဲ့ ၊ မင်းတို့အဖေလာရင် တိုင်ပြောမယ်။ " ကလေးအမိုက်တွေက သိတယ်။ အမေကတော့ အော်ရုံ၊ ဆူရုံပဲ။ ဒါနဲ့ အမေကို ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ အော် - အော် - ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမေ အအော်ရပ်လို့ ရိုက်ပြီဆိုရင်တော့၊ ကလေးတွေ နေတတ်သွားပြီ။ ကောင်းသွားကြပြီ။ အသိအတတ်မြန်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့် မှာ ဘယ်သားသမီးမှ မစုံလင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားသမီးအားလုံး ကျွန်တော်ပိုင်တယ်။ ဒါကို ဘယ်သူကမှ ပြောင်းလဲပစ်လို့ မရဘူး။ မွေးဖွါးခြင်းဟာ အပြီးပါ။
မွေးဖွါးရာမှာ ဝေဒနာခံရလေ့ ရှိပါတယ်။ Birth involves travail.
ကျွန်တော့် ဇနီးနဲ့ သမီးတွေ ကလေးမီးဖွါးကြရင် ကျွန်တော် အနားမှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့် သမီးဦး Sherry က သားဦးကလေးမွေးတော့ သူ့ခမျာ အတော် ကြိုးစားရရှာတယ်။ အပြင်းအထန် အားထုတ် ရုန်းကန်ရရှာတယ်။ သူ့အမျိုးသား Rick ရယ်၊ သူ့အမေရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် အတူရှိနေကြတယ်။ နောက်တော့ အခန်းထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်လာကြတယ်။ တကယ် ထိတ်လန့်စရာပဲ။ သမီးခမျာ အတော် ဝေဒနာ ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဒနာ မခံစားဘဲ မီးဖွါးလို့ မရဘူး။ " မိမိစိတ်ဝိညာဉ် ခံရသော ဝေဒနာ၏ အကျိုးကို မိမိမြင်၍ အားရလိမ့်မည်။ " - ဟေရှာယ ၅၃း ၁၁ ။
တနင်္လာ၊ အင်္ဂါနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလိုလိုမှာ ကျွန်တော် တနေရာရာမှာ တရားဟောရလေ့ရှိပါတယ်။ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ ညနေ တွေမှာတော့ အလုပ်တခုကို ကြံစည်နေတယ်။ ဒါဟာ ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ ပျောက်ဆုံးသူတွေအတွက် သားဖွါးခြင်း ဝေဒနာခံရတာပါပဲ။ အသင်းသားတွေ ဝေဒနာမခံစားရင် ဝိညာဉ်ထပ်မွေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မသနားကြဘူး၊ ဝေဒနာ မခံစားကြတော့ဘူး ဆိုပါစို့။ တယောက်တလေတော့ ကယ်တင်ခြင်းရ လိမ့်မယ်။ အဲဒါကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက် ဝေဒနာ မခံစားကြတော့ဘူး။ ပစ်ပယ်လိုက်ကြရင်၊ အားနဲနေကြရင်၊ ပျောက်ဆုံးသူတွေလည်း လွင့်ပါးမယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘာမှမစိုးရိမ်ကြဘူး၊ ဝေဒနာ မခံစားကြဘူး ဖြစ်နေမယ်။ ယုံကြည်သူတွေ တကယ် တာဝန်ယူကြရင်၊ လူငယ်တွေလည်း ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေအတွက် တကယ် တာဝန်ယူကြရင်၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက် နာကြင် ဝေဒနာခံစားကြရင်၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ငိုကြွေးကြရင်၊ မိတ်ဆွေတွေအတွက် သားဖွါးတဲ့ ဝေဒနာခံစားကြရင်၊ ဝိညာဉ်တွေ အသစ် မွေးဖွါးလာမှာပါ။ ဝိညာဉ် မွေးဖွါးခြင်းပေါ့။ ။
တခါ ပြန်မွေးမလား Will you be born again now?
Dr. Curtis Hutson ရဲ့ တရားဒေသနာကို ဖတ်ရှုခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါပြန်မွေးဖို့ လိုတဲ့အကြောင်းကို ကျမ်းစာနဲ့တကွ ဥပမာကလေးတွေပေးပြီး ထောက်ပြသွားပါတယ်။ အသစ်သော မွေးဖွားခြင်းဆိုတာ Born from above အထက်မှမွေးခြင်း၊ ဘုရားဇာတိကို ခံယူရခြင်း လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။ လူဟာ သဘာဝအတိုင်း မွေးတဲ့အတွက် လူ့သဘာဝကို ရပါတယ်။ ဘုရားသဘာဝ ရဖို့ကတော့ ဝိညာဉ်မွေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဘုရားသား၊ ကောင်းကင်သားဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ တခါထပ်မွေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ဒီ တရားဒေသနာမှာ သခင်ယေရှုကို အားကိုးရင် တခါပြန်မွေးတယ်လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ သခင်ယေရှုက သင့် အပြစ်တွေအတွက် ကားတိုင်မှာ လူစားထိုး အသေခံပါတယ်။ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးရုံနဲ့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခံရပြီး၊ ကယ်တင်ခြင်းရကြဖို့ အပြစ်ကြွေးတွေ ပေးဆပ်သွားပါတယ်။ သခင်ယေရှုကို အခု အားကိုးရင် ဘုရားသားဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းကင်မှာ နေစရာရပါတယ်။
အားကိုးရင်တော့ - အခုလို ရိုးရိုးကလေး ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
သခင်ယေရှု - -
ကျွန်တော် အပြစ်သားပါ။ ငရဲသွားထိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်စား ကိုယ်တော် အသေခံ၊ အပြစ်ကြွေး ပေးဆပ်တာကို ယုံပါတယ်။
ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အခု လက်ခံပါပြီ။
အပြစ်ခွင့်လွှတ်ပြီး၊ ကယ်တင်ဖို့ အားကိုးပါတယ်။
ကျွန်တော်ကို ချစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်တော့် မိသားစုထဲမှာ မွေးဖွါးပေးတော်မူပါ။ အာမင်။ ။
Posted by Papa at 10:20 AM
ANSWERS TO PRAYER ( Chapter2) ဆုတောင်းခြင်း
ကယ်တင်ခြင်း Our Common Salvation. Sermon By Dr. C...
အချိန် Blue Denim and Lace - by Dr. Jack Hyles ( B...
(Chapter2from Dr. Hyle's excellent book, Blue De...
သေးငယ်တဲ့ အရာတွေရဲ့ အရေးပါပုံ The importance of li...
Don't Overkill - Articles by Dr. Curtis Hutson ( 1...